ကြိုးဖုန်းနံပါတ်ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 13/01/2022 11:52 | အန်းဒရွိုက်, လည်ပတ်မှုစနစ်များ
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ဖြစ်ခဲ့သည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်တွင် ငြိမ်သက်စွာရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မတောင်းဆိုထားသော ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းချလိုသော အော်ပရေတာတစ်ခု၊ စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်စေလိုသူ သို့မဟုတ် အခြားခေါ်ဆိုမှုအမျိုးအစားတစ်ခုတွင် ပါဝင်လိုသူ။ တခါတရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေါ်ဆိုမှုကိုဖြေကြားပြီး အသံသွင်းခြင်းအား ကျော်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အံ့အားသင့်စရာမှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုတ်သွားပါသည်။ ငါတို့ကို ဘယ်သူခေါ်တာလဲ။ သိဖို့က မခက်ဘူးဆိုတော့ ကြိုးဖုန်းနံပါတ်ကိုရှာရန် နည်းလမ်းများရှိသည်။
သံသယမဖြစ်နိုင်သောအချက်ကြောင့် ဤသည်မှာ ဖြစ်နိုင်သည်- ကြိုးဖုန်းတစ်လုံးသည် အမြဲတမ်းကြိုးတပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ပြဿနာမရှိဘဲ ခြေရာခံနိုင်သည်။
မကြာသေးမီအထိ၊ လူတစ်ဦးကို ၎င်းတို့၏ ကြိုးဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် တည်နေရာရှာဖွေခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကြိုးဖုန်းနံပါတ်များအားလုံးကို စာရွက်စာရင်းတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အသက်အနည်းငယ်ရှိနေပြီဖြစ်သော မည်သူမဆို ၎င်းကို ကောင်းစွာမှတ်မိလိမ့်မည်- လူကြိုက်များသည်။ White ကစာမကျြနှာ. ၎င်းတို့တွင် လိုင်းအားလုံး၏ ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၏ အမည်နှင့် လိပ်စာတို့ကိုပင် ထည့်သွင်းထားသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်၊ White Pages များသည် ၎င်းတို့၏ စာရွက်ပုံစံကို စွန့်လွှတ်ကာ အွန်လိုင်းတွင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စာရင်းဖြစ်လာသည်။ ဤနည်းဖြင့် ကြိုးဖုန်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆိုသူ၏ အမည်ကို သိရန် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ သို့သော် အသစ်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဤဖြစ်နိုင်ခြေသည် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂဒေတာကာကွယ်ရေးဥပဒေ (စည်းမျဉ်း 2016/217) သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခြင်းကို ကန့်သတ်ထားသည်။
1 ကြိုးဖုန်းနံပါတ်ကို ရှာဖွေရန် လှည့်ကွက်များ
1.1 နံပါတ်ကို Google
1.3 *57 ကိုနှိပ်ပါ။
1.4 *69 ကိုနှိပ်ပါ။
2 လျှို့ဝှက်နံပါတ်တစ်ခုမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆိုပါက မည်သို့နည်း။
ကြိုးဖုန်းနံပါတ်ကို ရှာဖွေရန် လှည့်ကွက်များ
ဒီတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုကို ရှာချင်ရင် ဘယ်လိုရွေးချယ်စရာတွေ ရှိမလဲ။ ဤအရာသည် အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းပြပါမည်။
Google မှတဆင့် ပုံသေနံပါတ်တစ်ခုကို ရှာပါ။
အလွန်သိသာထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခု၊ သို့သော်ကိစ္စအများစုတွင်အတော်လေးအသုံးဝင်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွင် ကြိုးဖုန်းအချက်အလက်သည် ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် မေးခွန်းထုတ်ခံရလေ့ရှိသည်။ မတူကွဲပြားသော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှ ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည့် ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အလားတူ နံပါတ်များကို တရားဝင်စာမျက်နှာများတွင် လွှင့်တင်ထားသည်။
လုပ်ခြင်း Google နံပါတ်ရှာဖွေမှု နောက်ကွယ်ကလူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပေါများတယ်။ ဤနည်းဖြင့် တုံ့ပြန်ထိုက်သည် ရှိ၊ မရှိ သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းနံပါတ်များကိုရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့် အွန်လိုင်းလမ်းညွှန်ချက် Telexplorer
White Pages မရှိသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုများကို အရှိန်မြှင့်ရန်နှင့် ၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် ကြိုးဖုန်းနံပါတ်ကို ရှာဖွေရန် အွန်လိုင်းတယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ လူသိအများဆုံး လမ်းညွှန်အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Dateas.comစပိန်၊ ပြင်သစ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရနိုင်သည်။
infobel.comနိုင်ငံပေါင်း 60 ကျော်တွင် ရှိနေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသောခေါ်ဆိုမှု၏မူလအစကို ဤရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်ဖြင့် ခြေရာခံနိုင်သည်- ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့် *57 ကိုခေါ်ဆိုပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းက သင့်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူအသုံးပြုသည့် ခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံကိရိယာကို အလိုအလျောက် အသက်သွင်းပေးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ခြေရာခံမိသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤစနစ်၏တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာ ခြေရာခံအချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်မဟုတ်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ဂရုစိုက်နိုင်စေရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာမှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကိရိယာကို အသက်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ *69 ကိုခေါ်ဆိုပါ။ ၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအရာမှာနောက်ဆုံးခေါ်ဆိုမှုမှလက်ခံရရှိသည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသိရန်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူက ခေါ်သလဲဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရပါလိမ့်မယ်။
ဤဝန်ဆောင်မှုသည် ဖုန်းကုမ္ပဏီအများစုနှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
Trapcall၊ လူသိများသော ခေါ်ဆိုမှုတည်နေရာဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခု
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ငွေအနည်းငယ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံပြီး ခြေရာခံရန် ခေါ်ဆိုရန် ရည်ရွယ်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းသည် တန်ဖိုးရှိပါသည်။ အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကတော့ TrapCallတစ်လလျှင် $5 မှ $20 စျေးနှုန်းများဖြင့် ဤနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အနည်းဆုံး၊
ဤကုမ္ပဏီများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ငှားရမ်းခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည့်အရာမှာ ပုံသေလိုင်းမှခေါ်ဆိုသော မည်သည့်ပုဂ္ဂလိကနံပါတ်ကိုမဆို အချက်အလက်စုဆောင်းမည့် ဤကုမ္ပဏီထံသို့ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လျှို့ဝှက်နံပါတ်တစ်ခုမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆိုပါက မည်သို့နည်း။
လက်ခံရတဲ့အခါ ပိုလို့တောင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတယ်။ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ခေါ်ဆိုမှုများ. တယ်လီဖုန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများ (ကျွန်ုပ်တို့ကို တစ်စုံတစ်ခုရောင်းချရန် ခေါ်ဆိုမှုများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်သူများ) နှင့် အမည်ဝှက်ထားရန် ဤအရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သမားများကြားတွင် ၎င်းသည် အတော်လေးကို အဖြစ်များပါသည်။
ကံကောင်းစွာပင် ဤခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ကြိုးဖုန်းနံပါတ်ကို ရှာဖွေသူများ၏ အထောက်အထားကို ဆုံးဖြတ်ရန် နည်းလမ်းများရှိပါသည်။
အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို ဆက်သွယ်ပြီး ၎င်းတို့မှ ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်နိုင်မလား။ အမည်မသိ ခေါ်ဆိုသူ ID ဝန်ဆောင်မှု. သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည့်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုစီ၏ မူလဇာစ်မြစ်ကို အလိုအလျောက်အတည်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမေးခံရသောခေါ်ဆိုမှုသည် အမည်မသိ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်နံပါတ်မှ လာပါက၊ ၎င်းကို ပြန်ဖွင့်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်ကို ရယူနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » ကြိုးဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လိုရှာရမလဲ